स्पेनबाट १४ करोडको स्वास्थ्य सामाग्री आफै ल्याउने प्रथम नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पा, सलाम छ! – List Khabar
Home / समाचार / स्पेनबाट १४ करोडको स्वास्थ्य सामाग्री आफै ल्याउने प्रथम नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पा, सलाम छ!
स्पेनबाट १४ करोडको स्वास्थ्य सामाग्री आफै ल्याउने प्रथम नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पा, सलाम छ!
admin May 22, 2021 समाचार Leaveacomment 314 Views
काठमाडौं । आफै स्वास्थय सामाग्री ल्याउने प्रथम नेपाली राजदूत दावा फुटी शेर्पा स्पेनका लागि नेपाली राजदूत महामहिम दावा फुटी शेर्पा को’भिडको उपचारका लागि । स्पेन सरकारले प्रदान गरेको अति आवश्यक करिब १४ करोड स्वास्थ्य सामाग्री आफैले लिएर काठमाडौ आई पुग्नु हुने पहिलो नेपाली राजदूत हुनु भएकोछ ।
सबै नेपाली राजदूतले महामहिम दावा फुटी शेर्पाले जस्तै स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने हो भने कुनै पनि नेपाली अक्सिजन र उपचारको अभावमा अकालमा मृ’त्युवरण गर्नु । पर्ने थिएन महामहिम राजदूत दावा फुटी शेर्पा तथा मित्र राष्ट्रा स्पेन सरकारलाई ३ करोड नेपालीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद थुची छे भन्न चहान्छौ वहां राष्ट्रिय विभुती पासाङ ल्हमु शेर्पाको सुपुत्री हुनुहुन्छ !यो
पनि पढ्नुहोस्जा काभ्रेको चौँरीदेउराली गाउँपालिका– ९ गोठपानीमा श्रीमती हत्या गरी खाल्डोमा पुरेको आरोपमा प्रहरीले मृतकका श्रीमान् र ससुरालाई पक्राउ गरेको छ । चौँरीदेउराली गाउँपालिका– ९ गोठपानी कालिमाटीकी २२ वर्षीया सुमिना गुरुङको शव प्रहरीले गाडिएको स्थानबाट उत्खनन गरी बरामद गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक हरि खतिवडाका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मृतक महिलाका श्रीमान् २८ वर्षीय सोनाम लामा र ससुरा ६६ वर्षीय च्याङ्बा भनिने चन्द्रबज्र लामालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । मृतकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा पठाएको र थप अनुसन्धान सुरु गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।
Next नाकको टुप्पोमा हुन्छ यी ५ राशि भएका व्यक्त्तिको रिस